Ecotrade Group | ကျောက်ဇကာအမျိုးအစား၏ စျေးနှုန်း များပါ၀င်ပါသည်။
ကျောက်ဇကာ စျေးနှုန်းများ ကြည့်ရှုနိုင်သော App
ကျောက်ဇကာ အမျိုးအစားပေါင်း ၂၀၀၀၀ ‌‌ကျော်၏ ကုဒ် ၊ စျေးနှုန်းနှင့် ဓါတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ၀င်ရောက်အသုံးပြုလိုက်ပါ။
Eco Cat App is the finest listing of catalytic converters available today. We have invested heavily in cutting edge technology including X-Ray Fluorescence (XRF) testing, in conjunction with laboratory analysis, to precisely measure, to an extremely high level of accuracy, the precious metal content in any single catalytic converter. Eco Cat App သည် ကျောက်ဇကာအမျိုးအစားပေါင်းစုံ ပါ၀င်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားပြီး အသုံးပြုပြီးသော ကျောက်ဇကာများမှ အဖိုးတန်သတ္တုပမာဏကို သိရှိနိုင်ရန် XRF နည်းကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးခြင်း ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးခြင်း များဖြင့် တိကျသေချာစွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Eco Cat App သည် ကျောက်ဇကာ အစိတ်အပိုင်း စျေးနှုန်းများ ၏ နေ့စဥ် အရောင်းအ၀ယ် စျေးနှန်းများ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် အမြဲ update လုပ်လျက်ရှိသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ကျောက်ဇကား အမျိုးအစားများနှင့် တန်ဖိုးများကို Eco Cat Application တွင် အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
► SUBSCRIBE NOW !